आफैँलाई गोली हानु अघि हिटलरले भनेका ३ कुरा ! - Filmy Hotline
बीबीसी । १९४५ पछि हिटलरको एउटै चाहाना थियो, आफ्नो मृत्युको तयारी गर्ने। २५ अप्रिलमै उनले आफ्ना अंगरक्षकलाई बोलाएर भनेका थिए, जस्तो म आफैले आफैलाई गोली हानेर मरे भने तिमीले मेरो मृत शरिलाई बगैचामा लगेर आगो लगाइदिनु।
मेरो मृत्यु पछि कसैले मलाई नदेखुन र नचिनुन । त्यसपछि तिमी मेरो कोठामा जानु मेरो बर्दी, कागज र मैले चलाएका हरेक बस्तु जम्मा गर्नु र बाहीर आएर त्यसमा पनि आगो लगाइदिनु। बस् अटोग्राफले बनाएको फ्रडरिकको महान चित्र तिमीले नछुनु। जसलाई मेरो ड्राइवरले मेरो मृत्युपछि सुरक्षित बसर्लनबाट बाहीर लगेर जानेछन्।
आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनमा हिटलरले जमिनको ५० फिट तल सुरुङ बनाएर काम गर्थे र त्यही सुत्ने गर्दथे। र कहिले काहिँ मात्र बाहिर आउने गर्दथे। जहाँ चारै तिर बमले ध्वस्त भएका भवन हुन्थे।
हिटलरले मर्ने आत्महत्याकै दिन इवा ब्राउनसँग विवाह गरेका थिए। आफैलाई गोली चलाउनु अघि इवाले उनलाई छोडेर कतै नजाने भन्दै विलौना गरेकी थिइन्। तर त्यो विलौना हिटलरले सुनेनन्। अन्तिममा उनले आत्महत्या गरेरै छोडेका थिए।
Prevहाई ब्लड प्रेशरले चिन्चित हुनुन्छ ? यो हो ब्लड प्रेशर हटाउने मिठो फल
Next‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण नै बन्द हुने अवस्थामा !
‘सीधाकुरा टिम’ माथि बर्दिवाला गुण्डा (प्रहरी) को हातपात हेर्नुहोस् – अस्ट्रेलियामा पुनः सयौं नेपाली विद्यार्थी समस्यामा (भिडियो)